Abdirahman Fidhinle: Wasaarada Waxbarashada waa inay xakamaysaa dugsiyada gaarka – Guban Media
Guban View: Agriculture Minister, Ahmed Muumin Seed, Must Go
Guban View: Communist China’s Castor beans Farming in Wajaale Plains is Dead Wrong
Guban View: Kudos to President Bihi for Bringing Big Commodity Trader Trafigura to Berbera Oil Terminal
Fikrada Guban: Waa in la xakameeyo Beenta, Dacaayada BulshoTV Fidinayso
Somaliland: Wasaarada Caafimaadka Ayaa Ka Masuul Ah inuu xidhmo Wajaale Hospital
Osman Jama, Adam, Somaliland Minister of Education. (photo/file)
EDUCATION BLOG Faallo
Abdirahman Fidhinle: Wasaarada Waxbarashada waa inay xakamaysaa dugsiyada gaarka
September 19, 2019 Ali Mohamed 347 Views 0 Comments
Dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Somaliland oo ahaa 217 dugsi ayaa haatan gaadhay 315 Dugsi ku waas oo isugu jira kuwo Sare/ hoose iyo dhexe oo u kala baxa 78 dugsiyo oo sare iyo 237 dugsi oo isugu jira Hoose / Dhexe iyo 39 ah kuwa boodhinka ah ee la seexdo.Tirada guud ee ardayda dhigata ayaa lagu qiyaasay ilaa 120 kun oo arday.Tirada maclimiinta dugsiyaas ayaa gaadhaya 3500 macalin oo ka tayo iyo tacliin fiican macalimiinta dugsiyada dawalada wax ka dhiga.
Dugsiyadan tirada badan ee gaarka loo leeyahay waxaa lagu dhigaa ilaa iyo 6 manhaj oo kala duwan sida manhajka, Ingiriis, Sudaan, Kenya, masar, Yaman iyoTurkiga . badanka Dugsiyadan ayaan manhajkoodu ku mudeysneyn sida manhajka JSL oo ah 4-4-4 taas oo macnaheedu yahay 4 sano oo dugsi hoose ah, 4 dugsi dhexe ah iyo 4 dugsi sare ah. Qaar ka mid ah dugsiyadaa waxaa maamula dad ajaanib ah oo looga baqanaayo in ay ilmaha la yeeshaan waalidka oo ay maskaxdooda wax kale ku shubtaan. sida dhaqano qalaad iyo diin xag-jirnimo ah oo aan diinta islamka aheyn. Ka dib markii loo kuur galay ee daraasad lagu sameeyey qaar ka mid ah dugsiyadaa waxaa laga dhawaajiyey in qaar ka mid ah dugsiyadaasi ardeyda qaarkood ay ciqaabaan gaar ahaan dugsiyada boodhinka ah ee magaalooyinka ka baxsan oo iyana tiradoodu gaadhayso 39 dugsi.
In kasta oo Wasaaradda Waxbarashada Somaliland ay Waax gaar ah iyo Agaasime Waaxeed u sameysay kuna dadaashay sidii dugsiyadaa loo xakameyn lahaa ee manhajka dawliga ah loogu soo dabaali lahaa hadana ilaa iyo hada ” Faanoole fari kama qodna ” Maadaama maamulka Dugsiyadaasi ka madax banaan yihiin Wasaarada Waxbarashada hadana madaxbanaanidaasi maaha in ay waxa ay doonaan sameeyaan waxaana Maareeyaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ku adkaatay in uu qaar dugsiyadaa ka mid ah uu gudaha u galo oo uu kala xaajoodo arimaha manhajka dowliga ah iyo isku jaangoynta waqtiyada fasaxyada dugsiyada dalka.
Hadaba waa maxay khataraha dahsoon ee ku gedaaman Dugsiyadaas gaarka loo leeyahay ee JSL ?
1- iyada oo laga cabsi qabo in ardeyda dhigata qaar ka mid ah dugsiyadaas in fikirkooda la bedelo oo ay gacanta u galaan macalimiin xag jir ah ama qaar dhaqan qalaad iyo diimo qalaad ku jiita ardeyda.
2- Qaar ka mid dugsiyadaa ardaydu waxay dhigtaan waxbarasho kala dhiman maadaama mudeynta manhajkoodu ku saleysan yahay 3-3-3 sanadood oo keliya.
3- Ka dib markii la sameeyey u kuur gal dahsoon, lana waraystay arday kala duwan oo ay ku jireen ardey dhaqan celin loogu daray dugsiyadaa gaarka loo leeyahay, ayaa waxay ardaydaasi hayadaha ku shaqada leh Badbaadada caruurta uxaqiijiyeen in ay kala kulmeen Dugsiyadaas oo boodhin ahaa- jidh dil, nadaafad xumo, nafaqo daro, hanjabaad joogto ah iyo hagardaamooyin kale oo aanay qeexin.
4- Nasiib daro dugsiyada gaarka loo leeyahay gaar ahaan Shanta albaadada xidhay ee ajaanibku maamulo may soo marin markii horeba Wasaaradda Waxbarashada iyo wasaarada Arimaha Debeda ee JSL, mana laha qawaaniin iyo xeerar adag oo lagu dhaqo, Albaabkana kamaba furaan Wakiilada wasaaradda waxbarashada ee howshaa loo igmaday.
5- Maadaama Wasaaradda waxbarashadu hawsheedii ka soo bixi wayday dugsiyadaana ay ka buuxaan ardey sita dhalashada wadamada reer galbeedka,Waxaa ku soo maqan dugsiyadaa qaarkood Hayado caalami ah oo nabadgelyada caruurta qaabilsan, sidaa daraadeed waa in ay dugsiyadaasi taxadar badan sameeyaan oo samaystaan qawaaniin iyo shuruuc cadaynaaya in ardaydoodu gacan nabadgelyo ku sugan yahiin inta ay dugsiyadooda joogaan.
6-Waxay wasaaraddu ka gaabisay in ay dhamaystirto shuruucdii iyo qawaaniintii waxbarashada gaarka ah iyo ta dawliga ahba lagu hagi lahaa laguna dhaqi lahaa.
7-Dugsiyadani marna may soo dhaweyn ku dhaqanka meel marinta manhajka dowliga ah ee JSL iyo dhamaan xeerarka qeexaaya siyaasadda waxbarashada gaar ka ah.
Wasaarada Waxbarashaduna kumay dhiiran in ay yeelato awood ay rusqadaha kala noqonto ku haysta kuwa aan haysana ay ku khasabto in ay qaataan.
8- Dugsiyadani waxay indhaha ka rideen waajibaadkii iyo shaqadii wasaaradda waxbarashada iyo shuruudihii dawliga ahaa ee ku wajahnaa meel marinta iyo fulinta manhajka qaranka JSL.
9- Qaar ka mid ah dugsiyani waxay ilaa iyo hada ay ka biyo diideen in lagu dhigo afka hooyo iyo manhajka qaranka Somaliland.
11-Badanka dugsiyadaasi ma laha nimaad isku dheeli tiran oo lagu kantaroolo waxbarashadooda si loogu kal soo naado manhajyadooda ay ka soo waarideen dalalka debeda.
12- In kasta oo ay lacag badan ka qaadaan ardeyda dugsiyadaasi hadana qaar ka mid dugsiyadaasi ayaa tayada waxbarashadoodu aad iyo aad u liidataa https://indigenerics.com.
13- Hadii aanay wasaaradu dar dar gelin in ay wadashaqeyn buuxda la yeelato dugsiyadaas waxaa dhici doonta in ardeyda dugsiyadaasi ay helaan fursado loogu ogolaado in ay ku qishaan imtixaanka shahaadiga ah sida horeba loogu tuhmay
14-Waa in Wasaaradu ku khasabtaa in dugsi waliba iska diiwaan geliyo Xeer ilaaliyaha guud si uu ruqsad qaanuuni ah u helo loona helo cid loo raaco hadii dhibi ka dhacdo.
15- Waa in Wasaaraddu kantaroolaan tirada ardayda fasalkiiba fadhiisata, nadaafada dugsiga, tayada waxbarashada iyo tayada gaadiidka ardeyda qaada intaba,
16- Waa in Wasaaradda Waxbarashadu iyadu yeelataa Jaangoynta Waqtiyada la xidhaayo iyo waqtiyada la furaayo dhamaan dugsiyada JSL oo dhan.
17- Waa in Cashuurta ku waajibtay ay bixiyaan Dugsiyadaasi sida cashuurta sanadlaha ah iyo cashuurta shaqaalahooda.
18- Waa in dusgi waliba warbixin sanadleh ah oo dhameystiran uu geeyaa Wasaaradda Waxbarasha sanadkiiba si loola socda tayadooda waxbarsho ee dugsiyadaas.
19- Waa in Dugsiyada Gaarka loo leeyahay iyo Wasaaradda Waxbarashadu isugu yimaadaan Xayn daabka sharciga iyaga oo ixtiraamaaya xeerarka waxbarashada .
20 – Waa in Dugsiyada Gaarka loo leeyahay ay u hogaan samaan Xeer-nidaamiyaha loo dejiyey ee qeexaaya Siyaasada Waxbarashada gaarka loo leeyahay.
Gunaanad: Waxaa Xukuumada looga fadhiyaa in ay ka shaqeysiiyo Qorshaha Shanta sanadood ee Waxbarashada JSL ( 2017 – 2021 -ESSP ) kuna falkiso sifeyaashii loo kantarooli lahaa dugsiyada gaarka loo leeyahay, Waxaana laga sugayaa in ay soo nooleyso xukuumadu xidhiidhkii wada shaqeyneed ee dugsiyada gaar ka ah iyo wasaaradda waxbarashada. Waana in ay dar dar geliso barnaamijka isku xidhka dugsiyada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay isula jaan qaadaan dugsiyada dalku isuna caawiyaan dhinac kastaba.
Intensive Advisor ED BD PA
← WATCH: South African owned Pick n Pay store stormed in Zambia
UN oo weli wada dagaal ka dhan ah Somaliland →
Somaliland’s 2021 Legislative Elections: The Dangers of Pandering to Clannish, Identity Politics
Faallo Fikrada Guban
September 13, 2020 Ali Mohamed 0
September 11, 2020 Ali Mohamed 0